Baker-Olimpico isticmaali karo silikoon Maro adag Kibistii Mat - Shiinaha Baker-Olimpico isticmaali karo silikoon Maro adag Kibistii Mat qeybiye,-SHQD Factory
miisaanka: 2.65 oz / 75g (+/- 5g)
Waa maxay sababta Dooro The Baker Olimpico silikoon Kibistii Mat
Baker-Olimpico ayaa muhiim u ah wax xumu of derin ah, waxaan dooran heerka ugu sareeya ee Maro adag iyo Besian silicone dareere ah in ay wax xumu. mesh Maro adag ayaa u muuqda mid aad u cad iyo nusqaamaha ka jira xad siman kasta oo kale, Dhanka, silicone dareere Besian qabanayo si aad u wanaagsan, barti xoog, milicsiga iftiin wacan, siman geesaha, ma laalaabka leh iyo qashin.
Tan iyo cajiinka ka kooban oo ku saabsan 60-80% biyaha, Baker-Olimpico texture dalool ogolaanaya biyo inuu ololku iyada oo derin ah, tegaayo ku dhameysteen dubtey kaamil ah. Isticmaal aad buskud oo macmal ah, pizza, iyo kibis! Waa wax ku ool ah waayo keydsho, awdidu, oo la dubayo ee dhammaan noocyada cajiinka iyo sidoo kale haboon ee par-dubista ee tarts,
● cunto Healthy, waxaad isticmaali kartaa dermaha dubista non-ul halkii warqada soo Dejino qaali !
● derin Tani naftaada bixisaa, qoyska, saaxiibada mood delicious in aan u baahnayn wax saliid ama dufan .
● Haddii aad rabto in aad nolol caafimaad leh iyo sare oo tayo leh, silicone ku dermaha kariyaa wareega ahaan doonaa Kan aad wato wax ku ool ah daruuriya .
● Waxaa idinka badbaadin doonaa waqti badan lagu nadiifiyo sida ay jiraan in ka badan ma qasan dheg on digsiyada aad!